Global Voices teny Malagasy » Mbola misy dingana manaraka bebe kokoa… · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Novambra 2018 11:42 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika imanoela fifaliana
Noporofoin'i Ben Walker sy i Rebecca Mackinnon fa tsy very maina ny fihazakazahako manodidina ny efitrano niaraka tamin'ny mikrô. Nanao asa tsara izy ireo tamin'ny fanontàna ny resakay sy adihevitray ho anatina tantara fohy an-peo ho an'ny fampielezana an'onjampeo na podcast amin'ny hoavy. Raha toa ka tsy afaka nanatrika ny fivoriana Global Voices ianao, izay fampielezana an'onjampeo izay angamba no fampidirana haingana indrindra amin'ny zavatra ataonay. (Raha nanatrika ilay fivoriana ianao, henoy ihany izany ary aoka ho gaga amin'ny fomba nahavitan'i Rebecca sy i Ben namintina ny andro.) Ary mba mitorahà blaogy mikasika izany – mety ho tsara ny fampikorianana malalaka ity failo ity. Nanoratra tatitram-pivoriana tsara be  ho an'ny Sehatra Fifaneraserana Ho An'ny Demokrasia Manokana ihany koa i Rebecca, izay mameno tsara ilay tantara an'onjampeo.
Misy resaka mandeha ao amin'ny fanehoankevitr'ilay lahatsoratra ”fanambaràna”  farany teo. Fanontaniana roa izay hitako fa tena mahaliana manokana: fanambaràna ve ity fanambaràna nosoratantsika ity, sa ”fitaovana fanovoazana hevitra” kokoa? Ary oviana no hanapahantsika hevitra amin'ny famitana ny fandrafetana izany? Manitatra sy manatsara izany mandra-pahazoantsika zavatra toy ny Fanambaràna Cluetrain ve isika, sa mandroso miaraka amin'ny rakitra matevina sy vonona izay mampahazo aina antsika rehetra ny manao sonia izany? Mba midira ao amin'izany, tompoko, dia mba lazao aminay ny eritreritrao.
Nifindra monina avy tao amin'ny tranonkalan'ny Hoder nankany amin'ny tranonkalan'ny Harvard ilay wiki - mba jereo izany , azafady indrindra. Vao nanampy fizaràna iray aho, manasa olona hiresaka mikasika ireo tetikasa hiasany amin'izao fotoana izao izay mifandray amin'ny Global Voices, na manolotra tetikasa vaovao hitany fa mifanaraka amin'ny fitsipi-pitondrantenan'ny Global Voices. Toerana tsara mba hanandramana hevitra vaovao izany ary hangatahana ny fanampian'ny olona hafa amin'ny hetsika ataontsika. Mba mandraisa anjara rehefa afaka manao izany ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/20/130247/
 tatitram-pivoriana tsara be: http://www.personaldemocracy.com/node/208
 lahatsoratra ”fanambaràna”: https://globalvoicesonline.org/wp-trackback.php/28
 wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Voices
 jereo izany: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/wiki/index.php/Main_Page